Kulan looga hadlayay dib u eegista hindise Sharciyeedka dhulalka oo maanta lagu qabtay Baydhabo. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Kulan looga hadlayay dib u eegista hindise Sharciyeedka dhulalka oo maanta lagu...
Kulan looga hadlayay dib u eegista hindise Sharciyeedka dhulalka oo maanta lagu qabtay Baydhabo.
Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Wasaarada howlaha guud ee Dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wada jira ayaa Kulan muhiim u ah shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed ee kuna saabsanaa dib u eegista sharciga dhulalka ayaa manta ku qabteen Magaalada Baydhabo,
Kulankan waxaa ka qeybgalay guddiyadda Baarlamaanka u qaabilsan howlaha guud iyo dib u dhiska arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Guddoomiyaha gobolka iyo masuuliyiin kale .
Ugu horeyntii ayaa waxaa muhiimada kulanka ka hadlay Agaasimayaasha guud ee labada wasaaradood, guddoomiyaha gobolka Baay Ali Wardheere Dooyow, waxayna dul istageen muhiimada sharciga dhulalka oo ah mid ay ku nabad galayaan shacabka.
Shirka waxaa si toos ah u furay wasiir ku xigeenka wasaaradda hoowlaha guud Mudane Gaani.
Kulankan looga hadlayay dib u eegista hindise sharciyeedka dhulalka oo ay soo diyaarisay wasarada Howlaha Guud ayaa waxa lagu qabtay magaalada beydhabo ee xaruunta Gobolka Bay .
Muhiimada kulankaan ayaa ah fahanka iyo dib u dejinta dadka reer Miyiga ah iyo waxyabaha uu sharcigaan cusub ka qabo arrimaha dhulka.
Cisman Buule oo ah gudoomiyaha gudiga amniga iyo dib u dhiska iyo horumarinat reer miyaga ee Baarlamanka Koonfur Galbed Soomaaliya iyo Gudoomiayaha Gobolka Baay Cali wardheere cabdiraxaman oo labadooda kulankaan ka qeyb galay ayaa waxa ay soo hadal qaaden muhiimada uu leeyahay sharcigaan Bulshada reer koonfur Galbed Soomaaliya .
Kusimaha wasiirka wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Koonfur Galbed Soomaaliya Maxamed cali Colow ahna Wasiir Ku xigeenka wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka Koonfur Galbed Soomaaliya oo isna Kulanka Khudbad ka jeediyay ayaa waxaa uu sheegay in sharcigaan ay wasaaradda ay juhdi iyo dadaaal dheer ay gelisay siidii golaha wasiiradda uga soo gudbi lahaa haddana uu horyaal Baarlamanka Maamulkaasi.
Maqaal horeDegmada Walanweyn oo loo magacaabey Guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda
Maqaal XigaFaahfaahin ka soo baxaya dil caawa ka dhacay Gaalkacyo